အလုပ်ကအချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကိုသင်ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ။ သင်ဤတွင်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောသင်၏ကိုယ်ပိုင်အပြုသဘောဆောင်သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အားဖြင့်အပျက်သဘောအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကြယ်များသည်လူများလည်း ဖြစ်၍ လူသေများကဲ့သို့ပင်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုချစ်မြတ်နိုးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကဘာလဲ ...
၇။ ဟောလီးဝုဒ်စုံတွဲများကိုချစ်ကြိုက်ခဲ့သည် Read more »
ketosis နှင့်အဘယ်ကြောင့်ထို ketogenic အစားအသောက်များတွင်ဒါရေပန်းစားသည်ကဘာလဲ။ ဘယ်သူ့ကိုသူမလာသူကိုမပေးပါဘူး။
ဗီတာမင်နှင့်ဓာတ်သတ္တုအခြားအာဟာရများခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ Ketosis သည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားသည့်အစာငတ်မွတ်မှုအခြေအနေဖြစ်သည်။ Ketogenic အဟာရသည်ကိုယ်ခန္ဓာအား ketosis အခြေအနေသို့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စွမ်းအင်ကိုဘိုဟိုက်ဒရိတ်မှမဟုတ်ဘဲအဆီများမှဆင်းသက်လာ ketone body မှရရှိသည်။ adipose တစ်ရှူးမှစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုယန္တရားကိုစတင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကလွတ်မြောက်ရုံသာမက
ketosis နှင့်အဘယ်ကြောင့်ထို ketogenic အစားအသောက်များတွင်ဒါရေပန်းစားသည်ကဘာလဲ။ ဘယ်သူ့ကိုသူမလာသူကိုမပေးပါဘူး။ Read more »
အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်မည်သည့်တူနာကိုဝယ်သင့်သနည်း။ အရသာအများဆုံးအရသာကိုရွေးချယ်ပါ
တူနာသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပရိုတင်းများနှင့်မပြည့်ဝသောဖက်တီးအက်စစ်များစွာပါဝင်သောအလွန်ကျန်းမာသောငါးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့နယ်မြေတွေရေမှာဒီငါးကိုလက်တွေ့မတွေ့ဘူး။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားဖမ်းဆီးရမိသောငါးများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုကုသရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ သို့သော်ကောင်းမွန်သောအရာမှာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖျော်ရည်ကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်တူနာသည်၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပြီးတော့ ...
အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်မည်သည့်တူနာကိုဝယ်သင့်သနည်း။ အရသာအများဆုံးအရသာကိုရွေးချယ်ပါ Read more »
ကျန်ရစ်ခဲ့ 13 အမှုအရာ: ကလေးဘဝဝမ်းမြောက်သောစိတ်လူကြီးများအတွက်ရရှိနိုင်မဟုတျပါ
ကလေးအတော်များများလျင်မြန်စွာသာလူကြီးများလုပျနိုငျသောအမှုတို့ကိုပြုမှတက်ကြီးထွားအိပ်မက်မက်။ ဥပမာအားဖြင့်, စျေးဝယ်များအတွက်ဆိုင်များမှလမ်းလျှောက်ဖို့, လတ်တလောအစည်းအဝေးများမှာရုပ်ရှင်သွား, ညဉ့်အထိသွားလာရကြ၏။ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့, သာသူတို့ကိုမရရှိနိုင်ပါကလေးတွေအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးလူကြီးများ
အီတလီနိုင်ငံ, မိဘ 10 တထောင်တစ်ဒဏ်ငွေပေးဆောင်နိုင်ပါ။ သူတို့ရဲ့သားသမီးများ၏ထုတ်ဝေဓာတ်ပုံများများအတွက်ယူရို
အီတလီတရားရုံးမိဘများကသူတို့သဘောတူညီချက်မပါဘဲလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်၎င်းတို့၏သားသမီးများ၏ရုပ်ပုံများကိုထုတ်ဝေခွင့်မရှိသောကြောင့်ဥပဒေထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ မိခင်က၎င်း၏နှစ်အရွယ်ဆိ၏အသုံးပြုသူများကကောင်းတဲ့ပုံရိပ်နှစ်သက်လိုလားလျှင်, တစ်ခုဖြစ်သည် 18 နှစ်ပေါင်းမှတဆင့်သူမှသုံးဘို့သူမ၏တရားစွဲဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်
8 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ငွေစုပေးခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသော လုပ်. , ပြန်သူမ၏ဆီသို့ရောက် လာ. ,
ဤဇတ်လမ်းကိုသင်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နှင့်ကောင်းသောတည်ရှိဆိုတဲ့အချက်ကိုယုံကြည်တဖန်စတင်ပေးသောပြီးနောက်သူတို့၏အမျိုးအများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကြောင့်ကောင်းသောထိကပြန်ပြန်၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်။ Viluppuram, အိန္ဒိယကနေ 8 အရွယ် Anupriya - ဇာတ်လမ်း၏သူရဲကောင်း။ ဝက်ဘဝ (ဆိုလိုသည်မှာ4နှစ်), ကလေးသိုလှောင်
12... 34 နောက်တစ်နေ့ →